Sirdoonka dalka Turkiga oo 80 muwaadin oo Turki ah ka soo qabtay 18 dal oo caalamka ah
Mogadishu - 13:29:09
Thursday April 05, 2018 - 23:30:30 in Wararka by Super Admin
Istanbul -ABC News
Howlgal aad u ballaaran oo ay Sirdoonka waddanka Turkigu ka fuliyeen 18 waddan oo caalamka ah ayay ku soo qab qabteen 80 muwaadin oo Turkish ah kuwaas oo ay dowladdu la xiriirinayso afgembigii dhicisoobay ee 2016 la doonayay in xilka lagaga tuuro madaxweyne Erdogan.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Turkiga, Bekir Bozdag ayaa wareysi uu siiyay Telefishinka ‘Haberturk’ waxa uu xaqiijiyay sida Sirdoonka Turkigu ugu guuleystay soo qabashada 80-kaasi qofood oo 6 nin oo ka mid ah laga soo qabtay waddanka Kosovo (shan macallin iyo hal dhaqtar), kuwaasoo lagu eedeeyay in ay taageerayeen isku daygii lagu afgembin lahaa Turkiga.
Bozdag, waxa uu intaa ku daray in sirdoonka qaranka Turkigu ay kooxahaasi laga shakisan yahay inay xiriirka la leeyihiin wadaadka Mareykanka deggan ee Fethulah Gulen lagu soo qabtay howlgallo ka dhacay 18 waddan, waloow uusan magacaabin dalalkaasi, isagoo ku nuux nuuxsaday in howlgallada nuucan ah ay sii socon doonaan.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha Kosovo, Ramush Haradinaj ayaa xilka ka qaaday Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Madixii Sirdoonka dalkaasi kaddib markii uu sheegay in ay dowladda ku soo war gelin waayeen lixdii qofood ee uu Turkigu ka watay Kosovo.
Waddanka Turkiga ayaa waxaa lagu xiray in ka badan 38,000 oo qofood oo lala xiriirinayo Gulen, iyadoo 110,000 oo qofood ku dhowaadna laga eryay shaqooyinkoodii dowladeed, balse waxaa la sii daayay intooda badan kaddib markii lagu waayay wax dembi ah.
Hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee caalamka iyo dalalka Midowga Yurub ayaa aad u cambaareeyay howlgalladaasi Turkigu kummanaanka kun ku soo xiray, iyagoo ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo uu samaynayo Erdogan.
80 people snatched from 18 countries over alleged links to coup - Turkey https://t.co/z1dk3eVsyZpic.twitter.com/a745qqp9g5